Akụkọ Gbasara Ihe E Dere na Baịbụl Mbụ Dị Ezigbo Mkpa
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
N’ime akwụkwọ okpukpe niile dị n’ụwa, e nweghị nke dị ka Baịbụl. N’akwụkwọ niile dịterela aka ka Baịbụl, o nweghị nke ọtụtụ ndị ka kweere ihe o kwuru otú ha si kwere n’ihe Baịbụl kwuru. Ma, e nwebeghị akwụkwọ a gbarala ụkwụ otú e si gbaa Baịbụl.
Dị ka ihe atụ, ụfọdụ ndị gụrụ oké akwụkwọ echeghị na ihe ndị e dere na Baịbụl ndị e nwere taa na ihe ndị mbụ dere Baịbụl dere bụ otu. Otu prọfesọ nke gụrụ gbasara okpukpe kwuru, sị: “Anyị ejighị n’aka na ndị sí na Baịbụl mbụ sụgharịa Baịbụl ndị anyị nwere taa sụgharịtara ya. E nwere ọtụtụ ihe ndị ha na-asụgharịtaghị. A sụgharịkwara ọtụtụ n’ime ha ọtụtụ narị afọ e dechara Baịbụl mbụ. Ihe ndị e dekwara na ha dị ezigbote iche.”
E nwekwara ndị ji maka ihe ndị a kụziiri ha n’okpukpe ha kwere na ihe ndị dị na Baịbụl ndị e nwere taa abụghị eziokwu. Otu nwoke aha ya bụ Faizal kwuru na ndị ezinụlọ ha na-abụghị Ndị Kraịst kụziiri ya na Baịbụl bụ akwụkwọ nsọ, mana a gbanweela ihe e dere na ya. O kwuru na o meziri ka ya na-enyo onye ọ bụla chọrọ ịgwa ya ihe dị na Baịbụl enyo. O kwukwara na a sịdị kwuwe, Baịbụl onye ahụ ji abụghị nke ezigbo ya, kama, ọ bụ nke adịgboroja.
Ọ̀ dị mkpa ka mmadụ chọpụta ma à gbanweela ihe e dere na Baịbụl ma ọ bụ na a gbanwebeghị ya? E nwere ajụjụ abụọ ga-enyere anyị aka ịma ma ọ̀ dị mkpa. Ha bụ: Ọ bụrụ na ị maghị ma ihe ọma ndị Baịbụl anyị na-agụ taa kwuru na Chineke ga-emere anyị n’ọdịnihu hà bụ ihe Baịbụl mbụ kwuru, obi ọ̀ ga-esi gị ike na ha ga-emezu? (Ndị Rom 15:4) Ọ bụrụ na ihe e dere na Baịbụl ndị e nwere taa dị iche n’ihe e dere na Baịbụl mbụ, ị̀ ga-eji ya na-ekpebi ụdị ọrụ ị ga-arụ, otú ihe ga-esi na-aga n’ezinụlọ gị, ma ọ bụkwanụ otú ị ga-esi na-efe Chineke?
Ọ bụ eziokwu na akwụkwọ ndị dere Baịbụl ná mmalite ji dee ya adịghịzi, anyị ka nwere ike ịhụ ọtụtụ akwụkwọ mpịakọta Baịbụl ndị e ji aka depụtaghachi n’oge ochie. Olee otú akwụkwọ mpịakọta Baịbụl ndị ahụ si dịrị ruo taa n’agbanyeghị na ha nwere ike irekasị, na e nwekwara ndị na-achọghị ka ha dịrị, nweekwa ndị chọrọ ịgbanwe ihe e dere na ha? Oleekwa otú otú a ha si dịrị ruo taa ga-esi mee ka obi sie gị ike na ihe e dere na Baịbụl ndị anyị nwere taa na ihe e dere na Baịbụl mbụ bụ otu? Gụọ isiokwu na-eso nke a ka ị mata azịza ajụjụ ndị a.